Apple zvakare inobvumira kudzikisira kuIOS 10.3.3 neiyo iPhone 6s | IPhone nhau
Apple zvakare inobvumira kudzikisira kuIOS 10.3.3 neiyo iPhone 6s
Ignacio Sala | | iOS 11
Mazuva mashoma apfuura, vakomana vanobva kuCupertino vakamira kusaina vhezheni yazvino yeIOS 10 iyo kambani yakanga yaburitsa, kubvisa chero mukana wekukwanisa kudzokera kuIOS 10.3.3, ichangoburwa vhezheni yeIOS isati yatanga iOS 11. Vazhinji vashandisi avo mushure mekuvandudzwa kuviri kweIOS 11, vanosimbisa kuti matambudziko ebhatiri, kunyanya ei iPhone 6s uye iPhone 7, vanoshandura chishandiso ichiita musoro unovamanikidza kuti vagare takura charger uende navo, nekuti nekushandisa kwese kwechigadzirwa, bhatiri rinopera mushure memasikati nerombo rakanaka. Apple haina kutaura nezvenyaya iyi, asi zvayakaita ndizvo re-kusaina iOS 10.3.3 chete pa iPhone 6s.
Hatizive chikonzero nei iyo chete iPhone 6s iri mudziyo uri mu ePanguva yekutsikisa chinyorwa, zvinokwanisika kudzokera kuIOS 10.3.3. Inogona kunge iri mhosho pamaseva eApple, kana kuti zvimwe kambani inoona matambudziko ebhatiri eichi chinhu chisina kubvumidza zviri pamutemo vese vakanganiswa kuti vadzokere kuIOS 10.3.3 kudzamara kambani yaburitsa chigadziriso chitsva.pano nguva ino kana, matambudziko ebhatiri ari yakagadziriswa.
Kana iwe ukarasikirwa nemukana wekudzokera kuIOS 10.3.3 uye uchida kusiya iOS 11, unogona kupfuura ichi chinyorwa kwandinotsanangudza zvakadzama mashandisiro atingaita kudzikisira kubva pane chero vhezheni yeIOS 11 kuenda kuIOS 10.3.3. Panguva ye download firmware iOS 10.3.3 uyu iwe inofanira kuoneka yakasvibira, semufananidzo unotungamira chinyorwa ichi, icho chinosimbisa kuti panguva ino ichiri kusainwa neApple.
Kana, kune rumwe rutivi, iri yakatsvuka, zvinoreva kuti Apple yamira kusaina. Kana Apple ikasaina iyo iOS vhezheni yaunoisa, mudziyo wacho hauzomboiti kuti ushandiswe uye hauzokwanisi kuushandisa kusvikira waisa zvakare vhezheni yeIOS inosayina, senge iOS 11.0.1 kana iOS 11.0.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple zvakare inobvumira kudzikisira kuIOS 10.3.3 neiyo iPhone 6s
Makomendi gumi, siya zvako
Raúl Aviles akadaro
inoita 4 makore
Zvakashata hazvisi 7 zvakare ... 🙁
Pindura Raúl Avilés
Ignacio Sala akadaro
mangwana zvimwe chete vanozvitendera. Kana ndikaziva nezvechimwe chinhu, ini ndinokuzivisa iwe.
Pindura kuna Ignacio Sala
Ini ndinofunga ndiri kuenda kudzikisira nyaya iri yakaipa kwazvo.
Ndakabva pamba ne100% it was 9 in the morning it is now 2 masikati and I am at 42% and it is a 6splus.
Vanoseka chokwadi ...
Pindura kuna abel
Ini ndakadzikisa yangu iPhone7 ivo vachiri kuenda (IOS 11 uye bhatiri iri chaiyo kutambudzwa) asi…. zvinova zvakandishamisa, sezvo ini ndinewo wachi uye vhezheni yacho yakaiswa, nekuti akandiudza kuti kuishandisa kwaifanira kuva neIOS11 uye zvedi wachi haugone kuidzikisa, saka ndakamanikidzwa kukwirazve nemhedzisiro yacho. hasha smartcase bhatiri uye ios11 pa80% bhatiri foni ndiyo iri pachena uye inomira kuchaja ichipedza bhatiri renhare pamheni yemheni, ios 10 izvi hazvina kumboitika kwandiri.
Ini ndinoshanda nenhare uye ichi chirango
Pindura kuna david
Ndapedza kudzikisa angu matanhatu kusvika ku6, izvo zvausingataure ndezvekuti gare gare hazvigone kudzoreredzwa ne backup yakaitwa neIOS 10.3.3 nekuti inokuudza kuti system yazvino yakura, saka unofanirwa kurodha pasi ese maficha, email maakaunzi… .etc, zvese nemaoko, enda faenon.
Pindura kuna Xavier
Kana ndikadzora iyo IOS 10.3.3 vhezheni yekuimisa kubva iTunes pane iyo iPhone 7 plus, ndichave nedambudziko here?
Pindura kuna Oswaldo
Apple iri kungosaina iOS 10.3.3 pane iyo iPhone 6s. Ukaiyedza pane imwe modhi, nharembozha haizomboite uye haugone kuishandisa. Icharamba iri pachiratidziro ichimirira kuitiswa zvachose.
Ini ndoda kuita zvakafanana ne @Oswaldo, dzokera kuIOS 10.3.3 pane yangu iPhone 6 Plus. Ndine iyo faira rakadhawunirodwa pc yangu, ndinogona kudzikisira neTunes kana haina kuita zvakadaro. Ndatenda
Pindura kuna Leonardo
Iyo inoshanda chete pane iyo iPhone 6s, pane imwe imwe modhi. Kana iwe ukakanda firmware uye ukaiisa, yako iPhone haizopfuure iko iko skrini uko kunonzi kuri kuita chishandiso.
Ndiri kunyatsofara ivo vakadonhedza iOS 10.3.3 pane iyo iPhone 6s, nekuti kuita kwebhatiri kwakashata chaizvo, uye ini ndakanga ndisati ndaita pfungwa dzangu. Asi nezuro ndakatanga kuona kuti maawai bhatiri anga agara uye anga ari maawa mana, apo isati yapedza maawa masere ekushandisa kwese. Kuverenga zvinyorwa painternet izvo zvandisingafanire kurodha chero chinhu, zvakamedza bhatiri rangu zvinotyisa. Saka ini zvirinani kutora mukana izvozvi kuti sarudzo iyi yadzoka kune yangu iPhone modhi.
Ndinotenda nekuda kwemashoko
Iko kushandisa bhatiri kunoshamisa kwazvo. Ini ndakasiya na7 am ne100% bhatiri iri 23:30 uye inoenda pa37% neanopfuura maawa mana ekubhurawuza pawebhu uye angangoita makumi matatu emavhidhiyo. Kudya 4 mukushandisa kumwe chete kunowana kuchaja kanokwana kaviri
Kwete, akura maPhones haasi kunonoka paIOS 11
Logitech Circle 2, kamera inochinjika senge pachayo